लोभैलोभले जेलिएका ज्ञवाली अन्ततः कानूनको फन्दामा, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
डिसी नेपाल , १९ आश्विन २०७५
काठमाडौँ । कुनै समय नेपालको बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा कमल ज्ञवालीलाई आर्दशका रुपमा लिइन्थ्यो । गुल्मीको सामान्य किसान परिवारमा जन्मिएका ज्ञवालीले देशकै व्यावसायिक बैंकिङ घरानालाई टक्कर दिने हैसियत बनाए । तर ज्ञवालीलाई धन कमाउने लोभले नराम्ररी च्याप्यो ।
नेपाली उखान ‘लोभले लाभ, लाभले विलाप’ भनेजस्तै भयो ज्ञवालीका लागि । तत्कालीन किष्ट बैंकका प्रबन्ध सञ्चालक रहनुभएका ज्ञवालीले आफैँले स्थापना गरेको बैंकलाई समस्यामा पार्ने गरी ऋण लिने वा दिने दुवै काम गरे।
उनलाई बैंक ठग्ने उद्देश्यले स्वीकृतिबिना कर्जा दुरुपयोग गरेको अभियोग लागेको छ । जम्को प्रकाशन प्रालि ज्ञवालीको श्रीमती गौरी खनाल ज्ञवालीको नाममा खोलिएको संस्था हो । पाटन उच्च अदालतले गौरीलाई समेत तीन वर्ष जेल सजाय र छ करोड २५ लाख बिगो जरिवानाको फैसला सुनाएको थियो ।
बैंकिङ कसूर गरेको मुद्दामा उच्च अदालत पाटनले २०७३ साल जेठ १३ गते ज्ञवालीलाई चार वर्ष कैद र चार करोड २६ लाख ८३ हजार ५११ जरिवाना गर्ने फैसला गरेको थियो ।
प्रहरी प्रवक्ता शैलेश थापाले जतिसुकै ठूलो पद र प्रतिष्ठामा रहेर अपराध गरेको भए पनि त्यो धेरै दिन नटिक्ने र कुनै न कुनै दिन कानूनको दायरामा आएरै छाड्ने बताए।
नेपालको इतिहासमै ठूलो बैंकिङ कसूरको अभियोग लागेका ज्ञवालीलाई पक्राउ गरेर प्रहरीले ठूलो सफलता हात पारेको छ । प्रवक्ता थापा भन्छन्, “प्रहरीले सबै खालको साधन र स्रोतको प्रयोग गर्न सक्दा जस्तोसुकै अपराधीलाई पनि पक्राउ गर्न सक्छ भन्ने पुनःपुष्टि गरेको छ ।”
लामो समयदेखिको अनुसन्धानले सफलता पाएको जानकारी दिँदै उनले अदालतको आदेशअनुसार कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढ्ने बताए।